Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Ma u Baahan Tahay Aerator on Tuunbo?
2020 / 09 / 17 QoondayntaTilmaamaha qasabada 20466 0
Dad badan ayaa aad u xiiseynaya, maxaa biyaha uga haray xumbada tuubada? Taasi waa sababta oo ah "Aerator" ayaa lagu rakibay gudaha, taas oo ka dhigi karta inay biyuhu tartiib tartiib hoos ugu dhacaan, isla markaana yareeyaan saameynta socodka biyaha, biyuhuna aysan ku sii fidi doonin jiinka dhexdiisa, waxayna si gaar ah u dareemeysaa raaxo marka la isticmaalayo. Sida la rumaysan yahay dad badan ayaa wali aad ugu qanacsan ereyga "Aerator". Yaab, aan ku baro adiga
Qoysas badan ayaa horay u rakibay qasabad laba jibbaaran. Ma jiro aerator, taas oo si gaar ah dhib u leh marka la isticmaalayo. Waxay kala firidhaa marka la furo oo yar. Ugu dambeyntiina, qurxinta guriga ayaa dooratay inay ku rakibto qasabad leh hawiye, taas oo runtii aad uga fudud
Waa maxay "afeefta"
Hawada waa inuu ka dhigaa biyaha socda iyo hawadu inay si buuxda isu dhafan yihiin, waxayna dareemeysaa inay yihiin finan yaryar oo la isticmaalayo. Haddii biyaha qulqulaya lagu daro hawada, waxay noqon doontaa mid jilicsan oo isla markiiba hagaajineysa awoodda baarista. Sidan oo kale, biyuhu wax badan ayey keydin karaan, kaliya ma ahan inaan lacag u keydshay kharashaadka biyaha waxaanan badbaadiyey ilo badan oo biyo ah magaalada oo dhan.
Waa maxay saamaynta rakibidda aerator?
1. Kaydinta biyaha: Haddii hawiyaha hawiyaha la rakibo, biyaha laga tagay ayaa gaabis ah oo ma biirayaan, waxayna badbaadin kartaa kalabar biyaha ay ka tagto qasabad caadi ah.
2. Ka-hortagga wax-buufin iyo buuq: Ka dib markii ay biyuhu qulqulayaan oo hawadana la isku darayo, biyuhu waxay noqonayaan kuwo jilicsan, isla markaana saamaynta saamaynta ayaa la yarayn doonaa isla wakhtigaas. Sawaxanka si gaar ah uma dhawaaqa. Qasabadaha caadiga ah ma aha oo kaliya buufin, laakiin sidoo kale buuq.
3. Sifaynta: Dadku waayadan waxay il gaar ah ku hayaan caafimaadka. Haddii la rakibo, waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa burburka iyo qashinka ku jira biyaha.
Sida loo nadiifiyo
Haddii aad u isticmaashid sanadka oo dhan adigoon nadiifin, saameyntu ma fiicnaan doonto, ama wey xirmi doontaa, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto nadiifinta, ku shub weel khal ka mid ah weelka, ku qoyso dhowr daqiiqo oo ku dhaq burush yar , maxaa yeelay khalku waa jeermis dilaa Haa, ka dib marka la dhaqo, rakib.
Intaas waxaa sii dheer, qasabadu waxay ku qalabeysan tahay aerator si loo gaaro shaandheyn iyo howlo kale, sidaa darteed looma baahna biyo sifeeye, oo biyaha la cabbo waa in la sifeeyaa, haddii kale jirka ayay ku xun yihiin.
Hore:: Sida Loogu Xidho Mashiinka Dhaqida Qasabada Next: Ikhtiyaarrada ugu Fiican Fududeynta Jikada ee Milkiilayaasha Guryaha